Nwere ike zụta ihe ọhụrụ Honor Magic Watch 2 | Gam akporosis
Nwere ike zụta ugbu a Honor Magic 2 ọhụụ
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo, Noticias, smartwatch
Adịlarị dị na Spain, site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ọhụrụ ya, ngwaahịa ọhụrụ atọ ewetara na February, site na ụlọ ọrụ Honor. Ọ bụ maka ama Sọpụrụ 9X Pro, ekweisi ikuku TWS Ime Anwansi Earbuds, na smartwatch Ime Anwansi 2.
Ngwaọrụ atọ dị iche iche, nke ọ bụla na mpaghara ya, a na-akpọ ka ọ bụrụ mmeri ahịa ọhụrụ na Spain n’iburu n’ibu ụzọ. Honor, n'agbanyeghị nsogbu na Huawei, na-aga n'ihu na-enwe ndị na-ege ntị na mba anyị. Ma enwere ndị ọrụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ngwaahịa ndị jikọtara ezigbo mma yana ọnụ ahịa dị mma.
1 Honor Magic Watch 2, Honor na-akawanye mma
2 Ha enweghi NFC, oke njo?
Honor Magic Watch 2, Honor na-akawanye mma
N'ime ngwaahịa ọhụrụ atọ anyị nwere ike ịzụta ozugbo site na webụsaịtị nke Honor, anyị elebara anya na nche. Ihe omuma ohuru nke Honor Magic Watch Ọ ka na-atọ ụtọ inye uru ya na ọnụahịa anyị nwere ike inweta ya. A version na aesthetically, ọ bụ ezie na ịgbaso akara yiri nnọọ nke mbụ, ghọrọ usoro nke ugbu a.
Nwa klas unu ezigbo maka nlekota egwuregwu ọrụ. The Honor Magic Watch 2 zuru oke maka ịnweta data ziri ezi site na mgbatị gị. Na ekele maka ịdị arọ ya, na nkwekọrịta zuru oke na nkwojiaka n'ihi eriri ya, ị gaghị achọpụta na ị na-eyi ya. Anyị na-achọta abụọ, otu dị ka nke mbụ version nke 42 mm, na a ibu mbipute na 46 mm dayameta na okirikiri.
Maka ndị na-achọ nnukwu elekere, 2mm Honor Magic Watch 46 bụ nhọrọ ịtụle. Ihe bụ ihe ọzọ, ndị kasị ibu version na size, o nwekwara batrị nwere ikike dị elu. Ya mere, anyị nwere a nnwere onwe nke ndi ozo adighi-abiaru nso. Anyị nwere ike iji Honor Magic Magic 2 ruo otu izu zuru ezu enweghị mkpa ịgba ụgwọ.
Ha enweghi NFC, oke njo?
Otu n'ime buts na anyị nwere ike tinye a ọhụrụ version nke a ngwaọrụ na ama ama ezigbo ngwaahịa bụ nke ọ bụghị na emejuputara ya na NFC. Mgbakwunye nke nwere ike ịgbasawanye ohere iji ya, yabụ, na ihe ndị ọzọ, ị gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ ozugbo na elekere kaadị kaadị anyị.
Anyị na-achọta atọ ahịa dị iche iche dabere na nha, na agba nke ịpị (na eriri) nke anyị họọrọ. Versiondị enwekwu ego, ojii gburugburu nke 42 mm akụkụ nke 169,99 €. Na dị oke ọnụ karị, Akwụ ụgwọ ọla edo 42mm 199,99 €. Ọnụahịa ndị nwere ego nkwado gụnyere onyinye ziri ezi ụbọchị mbụ nke Mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike zụta ugbu a Honor Magic 2 ọhụụ
A na-emelite ndị ahịa email na-atụgharị uche na 2.5 na mgbanwe mgbanwe, email na-echekwa dị ka PDF na ndị ọzọ
Esi rụọ ọrụ nchekwa na gam akporo